RW Rooble oo farriin adag u diray Madaxda Garsoorka dalka - Awdinle Online
RW Rooble oo farriin adag u diray Madaxda Garsoorka dalka
Rii’sul wasaaraha Xukuumadda JFS Mudane Maxamed Xusseen Rooble, Gudoomiyaha Maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr Sulaymaan Maxamed maxamuud ayaa Maanta si wadajir ah u daah-furay shirweynaha 3aad ee Qaran ee Xeer-ilaaliyaasha Soomaaliyeed.
Shirweynaha 3aad ee Xeer- ilaaliyaasha heer Qaran iyo heer Maamul Gobaleed wuxuu ku saabsan yahay xoojinta xiriirka xeer ilaaliyaasha Qaranka iyo kuwa Dowladda xubnaha ka ah Federalka. hal ku dhiga sanadkan waa “Cadaalad iyo Idkaashi”.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadiisa ay ka go’an tahay in uu ka shaqeeyo in shacabka Soomaaliyeed ay kunoolaan Caddaalad lana xaliyo tabashooyinka dhanka Cadaalad ah.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in cabashooyin badan soo gaareen xafiiskiisa oo ku saabsan hanaanka Garsoorka dalka uuna ugu baaqayo Madaxda Garsoorka in ay wax ka qabtaan.
Previous articleNin dilay Gabar uu kala dhaxeeyay xiriir Jaceyl & faah faahin laga bixiyay
Next articleAl-Shabaab oo soo bandhigay Gaadiid ay dagaal ku qabsadeen+Sawirro